The Rohingya News Bank : သင်္ဘော
Showing posts with label သင်္ဘော. Show all posts
ပင်လယ်ပြင်ထဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာသင်္ဘော ကယ် တင်ဖို့ UNHCR တိုက်တွန်း
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလတုန်းက တွေ့ခဲ့ရတဲ့ မလေးရှားရေပိုင်နက်အတွင်းက ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်သင်္ဘောတစီး။ (ဧပြီ ၀၅၊ ၂၀၂၀)
Andaman ပင်လယ်ထဲ စက်လှေတစင်းပေါ်မှာ ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုချက်ချင်း ကယ် တင်ဖို့ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီ UNHCR က ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ကြေငြာချက် ထုတ် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အရေအတွက်အတိအကျမသိရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေတင်လာတဲ့ စက်လှေတစင်း ပင်လယ်ထဲမှာ အင်ဂျင်ပျက်ပြီး အရေးပေါ် အကူအညီလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက် နေ့မှာ ရခဲ့တာလို့ UNHCR ကပြောပါတယ်။
Labels: 2021, mm, UNHCR, ပင်လယ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, သင်္ဘော
AA အဖွဲ့က မီးရှို့ခဲ့သည့် သင်္ဘောကို ဝန်ကြီးဌာန ပြန်လည်ဆယ်ယူရန် စီစဉ်နေဟုဆို
Mon, 2019-03-18 ရန်ကုန် Issue No.
No. 2088, Monday, March 18, 2019
မတ်လ ၁၇ရက်တွင် မီးလောင်ပြီးနောက် တွေ့ရသည့် ရတနာဝင်းသင်္ဘော (ဓာတ်ပုံ − Khumi Media Group)
ကုလားတန်မြစ်အတွင်း AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က မီးရှို့ ခဲ့သည့် သင်္ဘောသည် နစ်မြုပ်ခြင်း မရှိသော ကြောင့်တပ်မတော်ကလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပြီးပါက ပြန် လည်ဆယ်ယူရန် စီစဉ်နေသည် ဟု ဆောက်လုပ် ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရနှင့် သတင်းထုတ်ပြန် ရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ဆွေက မတ်လ ၁၇ ရက်တွင် ပြောသည်။
Labels: 2019, AA, mm, ကုလားတန်မြစ်, သတင်း, သင်္ဘော